Ny sarin'ny Chema Madoz Espaniola izay hahatonga anao hijery indroa | Famoronana an-tserasera
Jose Maria Rodriguez Madoz na fantatra kokoa amin'ny hoe Chema Madoz Teraka tamin'ny 1958, Madrid, dia mpaka sary espaniola malaza izay nandresy tamin'ny 2000 'National Photography Award'. Nanana fampirantiana maro izy, na tany Espana na tany ivelany, ary ny azy sangan'asan'ny sary mainty sy fotsy marina. Ny asany dia manangona sary nalaina tamin'ny lalao sary an-tsaina mahay.
Madoz malaza izy rehefa miresaka ny tanjon'ny sary hosodoko:
Ny zava-misy dia tsy fantatro izay ho fihetsik'izy ireo na inona no handrisika ny mpijery hoy i Madoz. Mitady sary mihetsika aho ary mameno ahy, izay mahatonga ahy hahatsapa ho manao zavatra hafa. Te-ho eo anoloan'ny sariko aho ary hahatsapa fa afaka mifandray amin'izy ireo. Raha milaza zavatra amiko ny sary iray dia azoko antoka fa mety hisy olon-kafa hiaina zavatra mitovy amin'izany, na zavatra mitovy amin'izany.
Chema Madoz ny sarinao ihany no miasa ao Mainty sy fotsy ho toy ny hanohitra ny ying sy ny an'ny singa nalainy sary. Ireo singa izay mandray anjara amin'ny tantara an-tsehatra farany sy minimalist izay ny hany safidiny haseho an'izao tontolo izao dia ny Mainty sy fotsy.
Mampiasa mainty sy fotsy aho amin'ny antony maro samihafa. Ny voalohany dia fampihetseham-batana amin'ny fampihenana, satria ianao mametra ny loko amin'ny safidy roa mifanohitra, zavatra izay mitranga koa amin'ny zavatra (amin'ny ankapobeny dia zavatra roa mifanohitra izy ireo). Ary etsy ankilany, manamora ny filalaovana ny endrika rehefa mametraka rohy na fifandraisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny sarin'ny Chema Madoz Espaniola izay hahatonga anao hijery indroa